Imandarmedia.com.np: निदाइरहेको बेलामा यौन-सपना किन देखिन्छ, के हुन्छ त्यसको अर्थ ? यस्तो छ रहस्य...
Health Lifestyle, Lifestyle, Lifestyle News » निदाइरहेको बेलामा यौन-सपना किन देखिन्छ, के हुन्छ त्यसको अर्थ ? यस्तो छ रहस्य...
निदाइरहेको बेलामा यौन-सपना किन देखिन्छ, के हुन्छ त्यसको अर्थ ? यस्तो छ रहस्य...
निदाइरहेको बेलामा एकपछि अर्को विचार, भावना र संवेदना अचेतनरूपमै मस्तिष्कमा आउनु सपना देख्नु हो ।
मानव इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि व्यक्तिले किन कुनै किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ, राम्ररी बुझ्न सकिएको छैन ।
सपना विभिन्न किसिमका (डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो तथा यौनसम्बन्धी) हुन्छन् । सामान्यतया प्रजनन प्रणालीले राम्ररी कार्य गर्न थालेपछि सेक्स हर्मोनले एकातिर यौनव्यग्रता तथा यौनतनाव बढाउँछ भने अर्कोतिर यस अवस्थामा वीर्यको पनि उत्पादन हुन थाल्छ ।